အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ် - စကားပြန် & တရားဝင်အဘိဓါန်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (သို့) poop အကြောင်းအိပ်မက်မက်တာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ကို C နှင့်အတူ
သင်သိရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား အနက် နှင့် အိပ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်? ထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်းဖြင့်အနားယူရန်ခွင့်မပြုသည့်ထိုအိပ်မက်ဆိုးကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ သင်အိပ်နေချိန်တွင်သင့်အားသိရှိစေရန်ကြိုးစားနေသည့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းသည်အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညအိပ်မက်များကိုမည်သို့တိကျစွာအနက်ဖွင့်နိုင်မည်နည်း။
သင်မသိနိုင်သော်လည်းညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်တက်တက်ကြွကြွရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးမည်မျှပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေစေကာမူအိပ်မက်မက်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အိပ်မက်တစ်ခုစီတိုင်းသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည် အိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်ကို ရှုပ်ထွေးသောကြံစည်ချက်များကိုအနက်ဖွင့်ရန်သင်ယူခြင်းသည်သင့်အားသင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုသိကျွမ်းလာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အဓိပ္ပာယ်ကို၏လေ့လာမှုနှင့် အိပ်မက်အနက် ၎င်းသည်အချိန်ကစပြီးလူသားများကိုအာရုံစိုက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစေသည်။ ရှေးခေတ်ကအိပ်မက်၏သင်္ကေတများအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ၂၀ ရာစုမှစိတ်ပညာဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဘုရားသခင့်သတင်းစကားကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်းအိပ်မက်၏အနက်ကိုလူ့စိတ်ထဲတွင်သို့မဟုတ်ထိုနေ့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတွင်သတိမဲ့စွာသိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဖော်ရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများအကြားကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်။
လောလောဆယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နာမည်ကျော် psychoanalysts နာမည်ကြီးလိုပဲ ဇီးဂမွန် Freud, ပြင်သစ်ဂျင်း Laplanche နှင့် Jean-Bertrand Pontalis သို့မဟုတ်ဆွစ် သူ Carl Gustav Jung အိပ်မက်အနက်ကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိသောအရာအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းမှရပ်စဲခဲ့ပြီးလက်တွေ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သငျသညျခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ဒီမှာငါ့ရည်ညွှန်းကျမ်းကိုးစာရင်းနှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာများမှ link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.
2 တရားဝင်အိပ်မက်အဘိဓာန် - အနက်သည်သင်အတွက်နက်နဲသောအရာမဟုတ်တော့ပါ
7 Psychoanalysis နှင့် Freud ၏အနက်
8 သူ Carl Jung ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ပညာ
11.1 အဆင့် ၁: ထုံအဆင့်
11.2 အဆင့် II: အလင်းအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်
11.3 အဆင့် III ကို: အကူးအပြောင်းဇာတ်စင်
11.4 အဆင့် IV: နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်
11.5 REM အိပ်စက်ခြင်းအဆင့်
အောက်ပါလိုင်းများတွင်သင်စာရင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့နိုင်သည် AZ ကနေအိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်ဝဘ်သုံးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်။ ဒီအိပ်မက်တွေအားလုံးဟာနာမည်အကြီးဆုံးစာရေးဆရာများရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအိပ်မက်တွေကိုစုစည်းပြီးငါခံစားခဲ့ရတဲ့အိပ်မက်တွေနဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပံ့ပိုးမှုအချို့နှင့်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအသေးစိတ်လေ့လာပြီးလေ့လာခဲ့ကြသောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းရှိသော်လည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမက်နေတယ်ဆိုရင် အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုလျှောက်လျှင်၊ ငါ့ကိုဝဘ်၏အဆက်အသွယ်အပိုင်းကတဆင့်ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ရေးပါ ငါသည်လည်းသင်၏အမှုကိုစုံစမ်း။ ၊ ထိုအိပ်မက်ကိုအခြားသောသူတယောက်အားကြားပြောလိမ့်မည်။
ကား၊ ကား (သို့) ကားတစ်စီးအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ကဏန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
: D နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအိပ်မက်တွေ
တစ်စုံတစ် ဦး အားအိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ခြင်္သေ့နှင့် ပတ်သက်၍ အိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အိပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အနားယူချိန်သည်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသောပြ,နာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်လေ့လာရေးခရီးဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အိပ်မက်အနက် ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းစေရန်။
တရားဝင်အိပ်မက်အဘိဓာန် - အနက်သည်သင်အတွက်နက်နဲသောအရာမဟုတ်တော့ပါ
ရှေးအချိန်ကယဉ်ကျေးမှုများသည်အိပ်မက်တစ်ခုစီကိုမည်သို့အနက်ဖွင့်ရမည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးအချို့မှာဆန်းကြယ်နက်နဲသောအယူအဆနှင့်အချို့သောသူများကသိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားယဉ်ကျေးမှုများကဲ့သို့ပင်နာမည်ကြီးသည့် charlatans နှင့်စိတ်ပညာရှင်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အိပ်မက်မက်နေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိစိတ်အတွင်းဖြစ်ပျက်သမျှသည်နိုးထနေသောအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့မသတ်မှတ်နိုင်သောသံသယများစွာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာလူသားများသည်ရာစုနှစ်များစွာမိမိတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလိုက်စားခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် စိတ်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုငါသိ၏ နှင့်မိမိကိုယ်ကို၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။
ကျနော်တို့တကယ်ကြိုတင်အိပ်မက်တွေရှိပါသလား? ဘာကြောင့်ငါတို့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုကိုယ်စားပြုတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါမသိစိတ်တစ်ပိုင်း indecipherable အတွေးများကိုဖန်တီးသနည်း တစ်ခါတစ်ရံအိပ်မက်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်နိုင်သည်။ ငါတို့အလုပ်ပျက်သွားပြီ၊ မိသားစု ၀ င်တစ်ယောက်သေဆုံးသွားတယ်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအိပ်မက်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်အလွန်တကယ့်အစစ်အမှန်ဟုထင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်မက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိစိတ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပို့ပေးသည်။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုလျှင် သင်၏အိပ်မက်များကိုမှန်ကန်စွာအနက်ဖွင့်နည်းကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ.
အိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ မည်သည့်အိပ်မက်ကိုအနက်ဖွင့်ရမည်ကိုသင်သိရန်အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာသိရုံသာမကအခြားအရေးကြီးသည့်အသေးစိတ်များကိုလည်းသိရန်လိုအပ်သည် နောက်ခံ သင်၏အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်သည်သင်၏နေထိုင်မှု၊ မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ပင်လျှင်အဓိပ်ပာယ်သက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက်အိပ်မက်၏တူညီသောအဓိပ္ပာယ်သည်လူအမျိုးမျိုးတွင်များစွာကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှေအိပ်မက် သင်သည်ငွေရတတ်သောသူဖြစ်၏။ အဆုံး၌အိပ်မက်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဂရိလူမျိုးများသည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုစဉ်ကအိပ်မက်များကိုအနက်ဖွင့်ရန်သူ၏စနစ်သည်ပါးစပ်အစဉ်အလာဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမျိုးဆက်တစ်ဆက်သို့တစ်ဆက်သို့ကူးပြောင်းသွားသောအများစုသောအတွေးအခေါ်များမှာ၎င်းဖြစ်သည် ဘုရားတို့၏အလိုတော် ထိုအိပ်မက်များတွင်တွေ့ရသောအရာများ
သို့သော်ဤယုံကြည်ချက်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, စာရေးဆရာများကြိုက်တယ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ပလေတိုသို့မဟုတ်အရစ္စတိုတယ် သူတို့ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပထမသမ္မတ၏ပထမနှင့်ဒုတိယအိပ်မက်အကြောင်းစာအုပ်များမှာရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမမေ့ဘဲအချိန်တန်သော် Pythagoras သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝသတ္တဝါများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Stoics Providence အပေါ်အလောင်းအစားနေစဉ်။ နောက်ပိုင်းတွင် Cicero သို့မဟုတ် Artemidoro ၏အမြင်အသစ်များလာလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အိပ်မက်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုခန့်မှန်းရန်အိပ်မက်ဟုခေါ်သည်။ အိပ်မက်တွေသာမက်ခဲ့တယ်၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေသာပါဝင်ခဲ့တုန်းကမာရ်နတ်ကသူတို့ကိုစတင်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမခံထိုက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ သီအိုရီအားလုံးရှိသော်လည်းဤသည်မှာမှန်ကန်သည် ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ technique ကို, Sigmund Freud ၏လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။
Psychoanalysis နှင့် Freud ၏အနက်
Freud နှင့်အတူလာမည့်အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်လေ့လာမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့၏အခြေခံများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခက်ခဲသည့်ဝေါဟာရဖြစ်သော်လည်း Freud သည်အချက်တစ်ချက်လာပြီးလိုက်နာခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်။ ငါပြချင်တယ် သင်္ကေတအိပ်မက်၌ထင်ဟပ်သူတို့ကငါတို့စိတ်နဲ့မသိစိတ်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်အိပ်မက်ကိုဆန်းစစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်မြင်ရသောအယူအဆများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုယူပြီးတစ်ခုတည်းနှင့်သာမနေပါနှင့်။ ထို့အပြင်အယူသီးသောနည်းစနစ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်ဆက်နွှယ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်မှုများသည်လည်းအလွန်ဆက်စပ်မှုရှိလိမ့်မည်။ Freud ကအိပ်မက်အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့သူတွေကို 'ပုံမှန်အိပ်မက်' လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သေခြင်း၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကတည်းက ပြည်တွင်းရေးပconflictိပက္ခကိုလင်းစေနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်သူကအိပ်မက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရှိဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန္ဒများကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူ Carl Jung ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ပညာ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Freud ကိုလေ့လာခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့လည်း Jung ကိုမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအတွေးအခေါ်များကြောင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သော်လည်းဆွစ်စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းလိုက်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်သူ့အတွက်အိပ်မက်တွေကသဘာဝတရားတစ်ခုပါပဲ။ နေ့တိုင်းသူလူနာများကိုလှည့်စားခြင်းနှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းများပြသနာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၊ ဒဏ္myာရီပုံပြင်များ.
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသူဟာသူနေထိုင်တဲ့၊ ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုအမြဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်သူကစုပေါင်းမသိစိတ်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်လူသားတို့အမွေရထားသောအပြုအမူဆိုင်ရာသင်္ကေတများဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပုံစံများသို့မဟုတ်အချို့သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအသိစိတ်များဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တိုတိုပြောရရင်တော့ Jung ကသူပြောချင်တာကိုပြောတာပါ အိပ်မက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသည် သူတို့ဝိညာဉ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့တံတားဖြစ်လိမ့်မည်။
စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုပုဂ္ဂလဒိivity္ဌိဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောဒြပ်စင်များစွာရှိသည်။ ဤဒြပ်စင်များ၏စေ့စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုသည်ဒေတာအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် အိပ်မက်များ၏အဘိ, မည်သူမဆိုသူတို့ရဲ့အနက်ကိုဘော်ပြနိုင်သည့်နှင့်အတူစာအုပ်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် အိပ်မက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေပါသူတို့ကိုယ်စားပြုသောအရာများနှင့်သူတို့၏သင်္ကေတများကိုနားလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်အဘိဓာန်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအခမဲ့စုပ်ယူနိုင်သည်။ သင်၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာလိမ့်မည်။ On အဓိပ္ပါယ် သင်သည်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်နက်ရှိုင်းသောကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါ့နာမ Nacho Zarzosa ဖြစ်ပြီးငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နောက်ကွယ်မှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်၏ ငါကနေစိတ်ပညာအတွက်ဒီဂရီရှိသည် Oviedo တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာန နှင့်အိပ်မက်နှင့် psychoanalysis ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအကြောင်းကိုအလွန်အသည်းအသန်။ ငါနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ် ဒီမှာနှိပ်ပါ.
မတူညီသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်တစ်ခုစီကိုသိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အား ပို၍ သာယာပျော်ရွှင်စွာအိပ်စက်အနားယူရန်နှင့်များစွာအနားယူရန်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အိပ်မက်တွင်များစွာသြဇာသက်ရောက်သောအရာဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်အဆင့်များကိုကောင်းစွာသိရှိထားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အဆင့် ၁: ထုံအဆင့်
ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးပါဝင်သည် ပထမ ၁၀ မိနစ်အိပ်စက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့နိုးကြားနေချိန်မှစပြီးကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်အိပ်မောကျသည်အထိဖြစ်သည်။
အဆင့် II: အလင်းအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်
ဒုတိယအဆင့်မှာအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည် အိပ်ချိန်စုစုပေါင်းရဲ့တစ်ဝက်ခန့်ကြာချိန် ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်မှတဖြည်းဖြည်းပြတ်တောက်သွားသောအဆင့်ဖြစ်သည် နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်နှေးကွေးအသက်ရှူခြင်း ဒါကြောင့်သာယာတဲ့နှင့်ပိုပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာသည်။ ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နိုးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်တွင်အလွန်ကြီးသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များသည်အခြားသေးငယ်သောအရာများနှင့်လည်းခြားနားသည်။ သာမာန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်မှနိုးလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။
အဆင့် III ကို: အကူးအပြောင်းဇာတ်စင်
တတိယအဆင့်သည်အားလုံး၏အတိုဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း ၂ မိနစ်မှ ၃ မိနစ်ခန့်ကြာသည် အလင်းအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအဆင့်အကြားအကူးအပြောင်း.
အဆင့် IV: နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်
နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်သည်စုစုပေါင်းအိပ်စက်ခြင်း၏ ၂၀% ကိုကြာရှည်စေပြီးအရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အနားယူခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့်တစ်နေ့တာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှခန္ဓာကိုယ်၏ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းသည်အလွန်နည်းပါးပြီးနှလုံးဖိအားကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဤအဆင့်မှသဘာဝအတိုင်းနိုးထရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
REM အိပ်စက်ခြင်းအဆင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်စက်ခြင်း၏ ၂၅% ခန့်ရှိသည်။ REM ဆိုတဲ့နာမည်ကို Rapid Eye Movement ကနေအင်္ဂလိပ်လိုရတယ် မျက်လုံးများသည်မျက်ခွံအောက်တွင်ရွေ့လျားနေသည်။ ဒီအဆင့်မှာ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုကအရမ်းမြင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုးနေချိန်နဲ့တူညီနေတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကလုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားတွေပိတ်ဆို့ထားတယ်။ ဒီအဆင့်ကာလအတွင်း အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်လာတယ် ဒါကြောင့်ဒီ website မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်မက်များအားလုံးသည်တူညီသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်လူအများခံစားနေရသောအိပ်မက်များဖြစ်သည် မင်းရဲ့ ex အကြောင်းအိပ်မက် သို့မဟုတ်ပင် နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ဟောင်းပြန်သွားဖို့စိတ်ကူးယဉ်, ရေအကြောင်းအိပ်မက်မက်ပါ, မစင်အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ပါ, ပျံသန်းရန်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်, သေနတ်သံများအကြောင်းအိပ်မက်မက်ပါ o အဆိုပါပျက်ပြယ်သို့ကျသွား၏အိပ်မက်။ အခြားသူများကိုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်နေစဉ် ရဲအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ ပိုမို၍ သာမန်အိပ်မက် (သို့) ပို၍ ထူးဆန်းသောအိပ်မက်တစ်ခုမက်ပါစေ အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအဖြစ်အနက်မရနိုင်ပါ။ အလားတူပင်၊ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အိပ်မက်ကိုမက်ခြင်းသည်အိပ်မက်တစ်ခုထက် ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အလုပ်သည်ရဲအရာရှိများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါက၊ ဥပမာဘဏ်သို့မဟုတ်ဆေးရုံတွင်အလုပ်လုပ်လျှင်ရဲအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခြင်းသည် ပို၍ များသောအရာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားအိပ်မက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိချင်တယ်ဆိုရင်နောက်မှအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်မလား အရာအားလုံးကိုရေးဖို့စက္ကူနဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်း မင်းအိပ်မက်မက်တာနဲ့အိပ်မက်ထဲကအဖြစ်တွေကိုမင်းမှတ်မိသွားပြီ။ အသေးစိတ်ကိုသေချာမှတ်သားရန်လိုသည်၊ ၎င်းကိုစနစ်တကျအနက်ဖွင့်သောအခါများစွာသောအဓိပ္ပါယ်ရှိနိုင်သည်။ နောက်မှ၊ သင်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အဘိဓါန်ကိုထည့်။ ၎င်းကိုပိုမိုနားလည်ရန် element တစ်ခုစီ၏သင်္ကေတများကိုလေ့လာပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ အိပ်မက်နှင့်သူတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကို, ဒါပေမယ့်မင်းသင်ယူနိုင်တယ် ခြင်္သေ့နှင့် ပတ်သက်၍ အိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း သို့မဟုတ် ပိုးဟပ်အကြောင်းကိုအိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် ပိုက်ဆံအကြောင်းကိုအိပ်မက်၏အနက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် နက်ရှိုင်းစွာသိုထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ယခုမှစ။ သင်သည်အိပ်မက်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ညတိုင်းသင့်ကိုယ်သင်အနည်းငယ်ပိုသိရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ။
© 2022 | အဓိပ္ပါယ်များ-suenos.com: အိပ်မက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏တရားဝင်အဘိဓာန် | Nacho Zarzosa အားဖွငျ့ဖွစျသညျ